Iindaba - Iinkampani zeemveliso ze-bamboo kufuneka zithathele ingqalelo xa zisenza ishishini lokuthumela ngaphandle?
Iinkampani zeemveliso ze-bamboo kufuneka ziqwalasele ntoni xa zisenza ishishini lokuthumela ngaphandle?
Ngenxa yokuveliswa okuphezulu kunye nokukhuselwa kokusingqongileyo kwe-bamboo, iimveliso ezininzi ze-bamboo zineepateni zendalo ezizodwa, zilula kwaye zihle, kwaye zizityebi kwinkcubeko. Umzekelo, ifenitshala ye-bamboo nayo ineempawu zokufunxa ukufuma kunye nokufunxa ubushushu, ishushu ebusika kwaye ipholile ehlotyeni, icoca umoya kunye ne-anti-static. , Ukufunxa imisebe ye-ultraviolet kunye neminye imisebenzi, ngoko ke, iimveliso ze-bamboo zaseChina zithandwa kakhulu ngabathengi baseChina nakwamanye amazwe angabamelwane.
Kuyaqondwa ukuba ukusuka kwi-2017 ukuya kwi-2020, ukuthunyelwa kwefenitshala ye-bamboo yaseChina kuye kwanda ukusuka kwi-US $ 88.4221 yezigidi ukuya kwi-US $ 129 yezigidi. Kuqikelelwa ukuba ukuthunyelwa ngaphandle ngo-2021 kuya kudlula i-US $ 150 yezigidi. Phakathi kwabo, i-United States, i-Australia, iJamani kunye namanye amazwe aphuhlileyo yizona njongo eziphambili zokuthumela ngaphandle kwefenitshala ye-bamboo yasekhaya. Ngexesha elifanayo, kunye nokuqiniswa "kweplastiki yokuvinjelwa" eYurophu nakwamanye amazwe, kulindeleke ukuba imarike yemveliso ye-bamboo yaphesheya iya kungenisa indawo ebanzi yophuhliso. Ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zelizwe zamazwe ahlukeneyo, xa iimveliso ze-bamboo zaseTshayina zithunyelwa ngaphandle, kufuneka zifumane isatifikethi sesiqinisekiso esifanelekileyo ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zentengiso yasekhaya yeemveliso ze-bamboo ezifanelekileyo. Ke, yeyiphi imiba ekufuneka amashishini emveliso ye-bamboo anikele ingqalelo kuyo xa esenza ishishini lokuthumela ngaphandle? Ngophando lwe-intanethi, kufunyenwe ukuba xa i-bamboo kunye neemveliso zokhuni zithunyelwa kwamanye amazwe, iziqinisekiso zemvelaphi, iziqinisekiso zokuhlolwa komgangatho, iziqinisekiso zokutshisa, njl. ukwenza isicelo sokuhlolwa kunye nokubhengezwa kwezithethe. I-bamboo kunye neemveliso zokhuni ezithunyelwa eMelika, eCanada, nase-Australia kufuneka zifake isicelo sesatifikethi sokutshisa, kwaye izithuthi eziya kwamanye amazwe kufuneka zifake isicelo sesiqinisekiso sokuhlolwa komgangatho.
Umzekelo, umgangatho wokutshisa kwiimveliso zokhuni ezingeniswa ngaphandle eIndiya: unyango lokutshisa lufuna i-48g/m3 ye-methyl bromide fumigation iiyure ezingama-24 ku-21℃ okanye ngaphezulu; unyango lobushushu lufuna unyango lobushushu kwi-56℃ (ubushushu obungundoqo bomthi) kwiziko kangangemizuzu engama-30. Iimfuno zokutshisa kwiimveliso zokhuni ezivela kumazwe angaphandle e-Australia: Zonke iimveliso zeplanga ezithunyelwa e-Australia eziphantsi konyango lokutshisa i-methyl bromide kufuneka zikhatshwe sisatifikethi sokutshisa, kwaye imigangatho yonyango kufuneka ihambelane nemimiselo ye-Australian methyl bromide fumigation. Ngokumalunga nomba wokusonga iplastiki, kuyafuneka ukuba kuboniswe kwisatifikethi “iphakheji yeplastiki engasetyenziswanga”, “unyango lokufunxa phambi kokusebenzisa ipakethe yeplastiki” okanye “iphakheji yeplastiki esetyenzisiweyo idibana nomgangatho we-Australian methyl bromide fumigation” wokusonga nokugqobhoza. Ukongeza, iinkampani ezithumela ngaphandle imveliso ye-bamboo zihlala zidibana nemilinganiselo ethile yorhwebo yobugcisa. Ngokomzekelo, iinkampani ezithumela ngaphandle imveliso ye-bamboo zihlala zijongana neemfuno zesatifikethi senkqubo yemigangatho yezizwe ngezizwe, i-EU CE, isatifikethi se-EU FSC (isiqinisekiso sehlathi), isatifikethi se-US CARB (i-California Air Resources, i-USA) isiqinisekiso seKomiti yoLawulo), imigangatho yobugcisa, ukupakishwa kunye neemfuno zokumakisha, izinto ezinobuthi neziyingozi zinciphisa iimfuno, kunye neemfuno zokhuseleko lwezinambuzane.
Phambi kwala manyathelo orhwebo angaphandle, iinkampani zethu zeemveliso ze-bamboo zinokwenza oku kulandelayo xa zisenza ishishini lokuthumela ngaphandle:
Enye kukuphucula umxholo wobugcisa weemveliso. Amashishini kufuneka akhuthaze imveliso esemgangathweni, omeleze ukubekwa kweliso kuyo yonke inkqubo yemveliso, aphumeze uhlolo olungqongqo kunye nokuvalelwa yedwa, kwaye alawule imiqobo “yokufikelela nokuphuma” ukuphucula umgangatho wemveliso nokwandisa ukukhuphisana. Kwangaxeshanye, kuyimfuneko ukuqinisa ngokukhutheleyo ukuveliswa kweteknoloji, ukuphucula iinkqubo zemveliso, kunye nokulungelelanisa imigangatho yobugcisa yamazwe / imimandla yokuthumela ngaphandle.
Okwesibini kukuqhuba ngenkuthalo umsebenzi woqinisekiso lwamazwe ngamazwe. Ukuqhuba i-R & D kunye nemveliso ngokuhambelana nemigangatho kunye nemimiselo yelizwe / ingingqi yokuthumela ngaphandle, ukuphucula ngakumbi inkqubo yokulawula umgangatho kunye nokulawulwa kwezinto ezinobungozi, izinto ezinetyhefu kunye ezinobungozi kunye nokulawulwa kokulandeleka njengento engundoqo, kunye nokomeleza ukhuseleko lwezinto eziluhlaza. ukungena kumzi-mveliso, ukusetyenzwa kwemveliso, ukugcinwa kunye nezinye iinkqubo Ukuhlolwa komgangatho kunye nolawulo, kwaye ufumane isatifikethi samazwe ngamazwe ngokukhawuleza, kwaye ufumane isatifikethi sokuhlola esifanelekileyo.
Okwesithathu kukubuyisela ulwazi kumasiko ngexesha elifanelekileyo. Amashishini angamangqina emilinganiselo yorhwebo yobugcisa, kwaye banokuqonda kwangethuba utshintsho kumanyathelo anxulumeneyo kunye nokuphendula ngokukhawuleza, kwaye izisombululo ezicetywayo zihlala zizichwephesha, zifanelekile kwaye zinokwenzeka. Ke ngoko, kucetyiswa ukuba iinkampani zokuthumela ngaphandle kwemveliso ye-bamboo zilandele ngokusondeleyo utshintsho lwamva nje lwemigaqo yobugcisa bangaphandle, zinxibelelane namasiko kwangexesha kwaye zixele iingxaki ezifunyenwe yinkampani, eziya kunceda iinkampani ukuba zijongane nemingcipheko yokuthumela ngaphandle kweemveliso ze-bamboo. ngaphambili.
Kwangaxeshanye, amasiko kwimimandla eyahlukeneyo ayafuneka ukuba athathe inyathelo lokuqala ukunceda iinkampani zeemveliso ze-bamboo ziqonde imigaqo-nkqubo efanelekileyo. Ngokomzekelo, ukuze kuncedwe i-bamboo encinci kunye ne-micro, amashishini enkuni kunye nengca aye phesheya kwaye afumane indawo eqinile kwimarike, i-Huzhou Customs ibonelela ngenkxaso yobugcisa kwelinye icala kwaye ikhokela amashishini ukuba athathe amanyathelo okuphendula okujoliswe kuwo; kwelinye icala, ijolise kumashishini amancinci kunye namancinci anamava angonelanga kunye nokunqongophala kweetalente zobungcali. Imibuzo, ukulungelelanisa abasebenzi abakhethekileyo kwisikhokelo esilungiselelwe, ukukhokela ukukhutshwa kwemveliso kuyo yonke inkqubo; I-Hunan Yiyang Customs ithathe inyathelo lokukhuthaza imigaqo-nkqubo kunye nokukhuthaza ukuthunyelwa kwemveliso ye-bamboo kumazwe angaphandle. Kulo nyaka, ukuthunyelwa ngaphandle kweemveliso ze-Yiyang bamboo kulindeleke ukuba kudlule i-10 yezigidi zeedola zaseMelika.
Indawo yesityalo saseTshayina, umthamo wesitokhwe, kunye nemveliso yeemveliso ze-bamboo zezona zikhulu emhlabeni. Ukuveliswa kunye nokuthengiswa kweemveliso ze-bamboo e-China kuya kuba nesiqinisekiso sokubonelela esinamandla kwihlabathi kwixesha elizayo. Ukuthunyelwa kwemveliso yoqalo lwaseTshayina kukwanceda ekwandiseni impembelelo yoshishino lwaseTshayina lwe-bamboo kwibala lamazwe ngamazwe.
Ixesha lokuposa: Oct-27-2021